जानकारी – ईमेची डटकम
काठमाडौं । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय फर्मास्युटिकल्स तथा मेडिकल उपकरण निर्माता कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनको पाउडरमा क्यान्सरको तत्व एसबेस्टस फेला परेको छ । अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (यूएसएफडीए) ले परिक्षणका लागि लिएको केहि नमुनामा क्यान्सरको कारक तत्व फेला परेको हो । बालबालिकाका लागि स्याम्पु, साबुन तथा पाउडर बनाउने कम्पनी उक्त तत्व फेला परेपछि स्वेच्छिक …
Continue reading “जोनसन बेबी पाउडरमा भेटियो क्यान्सरको तत्व, ३३ हजार बोतल पाउडर फिर्ता”
Posted byइमेची संवाददाता November 6, 2019 December 11, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on जोनसन बेबी पाउडरमा भेटियो क्यान्सरको तत्व, ३३ हजार बोतल पाउडर फिर्ता
तीन वर्षकी एक बालिका यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्चामा छिन् । उनी चर्चामा हुनेको खास कारण उनको ‘क्युटनेश’ हो । उनी निकै मायालाग्दी र राम्री पनि देखिन्छिन् उनको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि एकछिन नहेर्ने कम मात्र होलान् ।इजरायलकी एनाहिता हासेमजादे अहिले ३ वर्षकी भइन् । तीन वर्षकी यी सानी नानी यतिवेला मोडलिङका कारण चर्चामा छिन् । …
Continue reading “यी हुन् विश्वकी सबैभन्दा ‘क्युट’ बालिका, तीन वर्षको उमेरमै मोडलिङ”
Posted byइमेची संवाददाता November 5, 2019 December 11, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on यी हुन् विश्वकी सबैभन्दा ‘क्युट’ बालिका, तीन वर्षको उमेरमै मोडलिङ
कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मन पर्छ । हरेक युवतीहरु कपाल लामो बनाउने सौन्दर्य प्रशाधनको खोजीमा भौतारिइरहेका हुन्छन् । तर, घरैमा सर्वसुलभ प्याज कपालको सुन्दरताका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला । प्याज कपाल झर्ने र दुई मुखे कपालका लागि उपयोगी हुन्छ । प्याजमा रहेको सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ, जसले कपालको विकासका लागि …
Continue reading “यस्ता छन् कपाल लामाे बनाउने घरेलु उपाय”
Posted byइमेची संवाददाता November 5, 2019 December 11, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on यस्ता छन् कपाल लामाे बनाउने घरेलु उपाय
हामीले सुनेकै-बुझेकै छौंः डाक्टरको सुझाव बिना औषधि खानु हुँदैन। व्यवहारमा यो लागू नगर्नेहरू भने धेरै छौं। टाउको दुखेदेखि झाडावान्तासम्म कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ भइसकेको छ। यति थाहा नहुनेहरूका लागि अर्का विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन्, हाम्रा डाक्टर उही। यसरी जथाभावी औषधि किनबेच र खाने गर्नुहुँदैन भन्ने हामीले नबुझेको होइन। डाक्टरहरूले पनि भन्छन्। अझ हरेकजसो …
Continue reading “हेर्नुस्, जान्नुस् र सचेत हुनुहोस् : औषधिको प्याकेट पछाडी हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ?”
Posted byइमेची संवाददाता October 24, 2019 December 10, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on हेर्नुस्, जान्नुस् र सचेत हुनुहोस् : औषधिको प्याकेट पछाडी हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ?
मानिस एकै महिनामा जन्मिन्छ भन्ने छैन। १२ महिना मध्ये जुन महिनमा पनि जन्मिएको हुन सक्छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने फरक महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव फरक पाइने गरेको छ। कुन महिनामा जन्मेका केटीमान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ त। यस्ता छन् फरक महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव: बैसाख यो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतय सुन्दर आँखा भएकी हुन्छन् …
Continue reading “कुन महिनामा जन्मेका केटीमान्छेको स्वभाव कस्तो ? थाहा पाउनुहोस्”
Posted byइमेची संवाददाता October 3, 2019 October 3, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on कुन महिनामा जन्मेका केटीमान्छेको स्वभाव कस्तो ? थाहा पाउनुहोस्
बला-त्कार जस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेका कृष्ण बहादुर महरा यतिबेला नेपाली समाचार र राजनीतिमा निकै चर्चामा छन् । आफ्नै सचिवालयमा काम गर्ने महिलालाई बला त्कार गरेको आरोपमा पद नै चट भएपछि महरा बिरुद्ध आम सर्वसाधारण, प्रतिपक्षी मात्रै नभएर नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले समेत मुखै फोरेर अभिब्यीक्त दिइरहेका बेला महराका दुई छोरा निर्मल महरा ‘एटम’ र राहुल …
Continue reading “महराको पद ‘चैट’ भएपछि छोराहरुले बन्दुक समाएको फोटो राख्दै नेकपाका नेताहरुलाई चेतावनी दिदै भने : ‘क्रान्तिकारीसँग फेरि भेट हुनेछ धैर्य गर्नोस्’”
Posted byइमेची संवाददाता October 3, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on महराको पद ‘चैट’ भएपछि छोराहरुले बन्दुक समाएको फोटो राख्दै नेकपाका नेताहरुलाई चेतावनी दिदै भने : ‘क्रान्तिकारीसँग फेरि भेट हुनेछ धैर्य गर्नोस्’
मान्छेका असंख्य चाहनाहरु मध्यै सबै भन्दा पहिलो चाहना हो, जवान देखिनु । चटक्क मिलेको ज्यान र जवान देखिने अवस्था कसलाई राम्रो नलाग्ला र ? जवान देखिनु भनेको सुन्दर देखिनु मात्रै पनि होइन । जवान देखिनुको अर्थ स्वस्थ हुनु र देखिनु हो, अनि तेजिलो र ओजपुर्ण देखिनु पनि हो । संसारभरका मानिसहरु जवान देखिनका लागि आफुले …
Continue reading “कसलाई मन हुदैन र जवान भैरहन , यी हुन् जवान देखिने २० सूत्र”
Posted byइमेची संवाददाता October 2, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on कसलाई मन हुदैन र जवान भैरहन , यी हुन् जवान देखिने २० सूत्र
काठमाडौ । प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शारीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख्न सकिन्छ । साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हिप र स्तनको आकारमा धेरै …
Continue reading “बिहेपछि महिलाको हिप बढ्नुको यस्ता छन् १० अनौठा कारण ! जुन सुनेपछी तपाई … पूरा पढ्नुहोस ??”
Posted byइमेची संवाददाता September 30, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on बिहेपछि महिलाको हिप बढ्नुको यस्ता छन् १० अनौठा कारण ! जुन सुनेपछी तपाई … पूरा पढ्नुहोस ??
जमिनको कारोबार गर्दा त्यसको क्षेत्रफल मापन अनिवार्य हुन्छ । वर्गफिट वा वर्गमिटर जग्गा मापनको सर्वमान्य इकाई हो । तर स्थानपिच्छे जमिनको क्षेत्रफल नाप्ने तरिका वा इकाई फरक हुन सक्छ । नेपालमा प्रायः जग्गाको क्षेत्रफल तराईमा एउटा र पहाडी भेगमा अर्को मानक इकाईमा नाप्ने गरिन्छ । तराईमा क्रमशः कुनुवा, धुर, कठ्ठा र बिघामा जग्गा नापिन्छ । …
Continue reading “जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी”
Posted byइमेची संवाददाता September 30, 2019 September 30, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी
हिन्दू शास्त्रअनुसार महिलाहरुलाई घरमा लक्ष्मीको दर्जा दिईने गर्छ । महिलाहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुने भएकाले पनि उनीहरुलाई यस्तो दर्जा दिने गरिएको हो। कुनै घरमा महिलाहरुलाई अपमान गर्ने वा नराम्रो व्यबहार गर्ने गरिएमा लक्ष्मीको श्राप मिल्ने र दुख कष्टको साथै आर्थिक संकटले घेर्ने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रको अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि …
Continue reading “शरिरको यी ६ अंग ठूला हुने महिलाहरुलाई छोड्दै नछोड्नुस्, हुने गर्छन् निकै धनवान र भाग्यमानी !”
Posted byइमेची संवाददाता September 30, 2019 September 30, 2019 Posted inजानकारीLeaveacomment on शरिरको यी ६ अंग ठूला हुने महिलाहरुलाई छोड्दै नछोड्नुस्, हुने गर्छन् निकै धनवान र भाग्यमानी !